Shukulaatada Swiss Meringue Buttercream - Sugar Geek Show - Dhaxan-Qaboojin Iyo Iicil
Shukulaatada Swiss Meringue Buttercream
Shukulaatada swiss meringue buttercream waa mid jilicsan oo jilicsan oo afkaaga ku dhalaalaya
Shukulaatada Swiss meringue buttercream ( SMBC ) waa kan aan ugu jeclahay dhammaan subagyada oo si cadaalad ah u fudud. Wax qarsoon ma leh. Kaliya ku milmi sonkortaada ukunta cusub ee dabka dabka biyo ka shidaysa (Bain Marie) ka dibna ku karbaasho meeris adag. Ku karbaash subaggaaga jilicsan, shukulaatada dhalaalay, milix iyo, vanilj waana taas! Haddii aadan rabin inaad ku jahawareerto kala dirista sonkortaada, waxaad sameyn kartaa majaajillo SMBC ( frosting buttercream fudud ) oo leh ukumo la kariyey waqti badhkeed. Looma baahna kuleyl maxaa yeelay ukunta cad ee la kariyey horay ayaa loo daaweeyay kuleylka. Kaliya ku karbaash oo dhan oo waad dhamaysay! Subaggan subagga badan ma aha mid aad u deggan sida shukulaatada caadiga ah ee loo yaqaan 'swiss meringue buttercream' laakiin wali waa mid aad u wanaagsan oo weyn haddii aad ku jirto waqti ciriiri ah.
Waxa ugu muhiimsan ee la xasuusto marka la sameynayo shukulaatada swiss meringue buttercream waa in la hubiyo in maacuuntaada oo dhan iyo baaqulilada isku darkaaga aysan lahayn dufan. Subag ama wixii hadhay oo dufan ku saleysan ayaa ka joojinaya meeriskaaga karbaashida taas oo noqon karta jahwareer weyn.
Had iyo jeer isticmaal baaquliyo bir ama galaas ah si aad u sameysid meringue. Balaastikadu waxay u egtahay inay ceshato baruur waxayna sababi kartaa meringue inuu fashilmo. Waxaa intaa dheer, maahan mid amaan ah in lagu rido baaquli caag ah biyo kulul.
Ukunta ukunta waa dhibaato guud oo keenta meringue-ka inuu yaraado. Xitaa dhibic yar oo jaallo ah (oo ah dufan) ayaa burburin kara meeris wanaagsan.
Si tan looga fogaado, iska hubi in markii aad jeexjeexayso ukumahaaga, aad midba hal ugu dhex jeexjeelay baaquli gooni ah ka dibna ukuntaas caddaanka ah ku wareeji weelka weyn. Habkaas haddii aad jabiso ukunta ukunta, ma baabi'inayso dhammaan dufcadii.
Hubso in subaggaaga loo jilciyey heerkulka qolka si uu ugu dhex murqo meringue iyada oo aan la marin.
xagee ka iibsan kartaa strawberry shiidan
Ka fogow adeegsiga ukunta cad ee la kariyey si aad u sameysid shukulaatada swiss meringue buttercream. Ukunta cadaanku kuma haboona in lagu karbaasho meringue xitaa haddii aad maamusho, meerisku wuxuu noqon doonaa mid aad u jilicsan.
Waxaan isticmaalayaa shukulaatada dhalaalay laakiin waxaad sidoo kale isticmaali kartaa budada kookaha haddii aad doorbideyso. Kufci budadaada kookaha si aad uga fogaato inaad kuus kuus budada kookaha ah ku sameyso badeecada aad dhameysay.
Sida loo sameeyo shukulaatada swiss meringue buttercream
Ku buuxi digsi dhexdhexaad ah qiyaastii laba inji oo biyo ah kuna kari isku kari. Dhig weelkaaga biraha ama dhalada isku qasan dheriga biyaha dusheeda. Weelka sagxadiisu waa inuusan taaban biyaha. Iska ilaali inaad ka baxsato uumiga. Weelku wuu ka dhigi karaa mid kulul sidaa darteed taxaddar oo isticmaal foornada foornada haddii loo baahdo si loo maareeyo baaquli.
Ukuntaada cad iyo sonkorta dhig baaquli oo ku xoq. Mararka qaarkood ku walaaq isku dar ah si aad uga ilaaliso cirifka kore ee ukunta cadaanku inay uusoo baxaan oo ay karsadaan.
Marka sonkorta ay kala baxdaan (ku faro farahaaga) waad ka saari kartaa baaquli dheriga biyaha waxaadna ku karbaashi kartaa meringue-ga adag. Hubso in meeriska uu aad u adag yahay. Aad ayey u adag tahay in si xad dhaaf ah loo sameeyo qaybtan. Isku qasiddu waxay qaadan kartaa 5-10 daqiiqadood iyadoo kuxiran sida ay uqarsantahay isku darkaaga.
Tilmaamaha meringue waa inay toos u istaagaan oo ay dareemaan cufnaan badan.
sida loo dhaqo miraha loo yaqaan 'raspberries' iyadoo aan la jebin
Boorso baraf ah ku rid weelka agtiisa adigoo isku daraya si aad u qaboojiso meeriska.
Marka meeriskaagu qaboobo, ku karbaash subaggaaga jilicsan, shukulaatada dhalaalay, vanilj, iyo milix. Hubso inaad karbaashto ilaa inta subaggaagu uusan yeelan doonin wax dhadhamin ah subagga. Waa inuu noqdaa mid aad u fudud oo kareem leh oo ku milma afkaaga.
Ka dib markii subagaaga subaggu karbaasho, waxaan jecelahay inaan u wareego lifaaqa suufka oo aan isku qaso meel hoose illaa 10 daqiiqo si aan uga saaro wixii goobooyin hawo ah oo xad dhaaf ah.
Dhibaatooyinka shukulaatada swiss meringue buttercream
Meringue ma karbaashi doono - Ukunta cad waxay noqon laheyd mid gabowday ama xoogaa dufan ah waxaad kuheshay isku dar ah. Nadiifi maacuuntaada oo dhan mar labaadna isticmaal ukunta cusub.
My buttercream waa la duudduubay ama wuxuu u eg yahay mid kala go'ay - Marka dufanka (subagga) isku dayo inuu isku qaso biyo (ukunta cad) waa inay ahaataa heer kul isku mid ah. Haddii buttercream-kaaga la duuduubay, waxay u badan tahay in subaggaagu aad u qabow yahay. Ama toosh dhinaca weelka ku shub shumaca shumaca jilicsan intaad isku dhex qasaneyso ama iska saareyso 1/4 koob oo isku dar ah, ku dhalaali microwave-ka oo dib ugu shub si aad u wada keento.
My buttercream waa mid aad u jilicsan - Haddii subagaaga subag uu aad u jilicsan yahay una muuqdo mid maraq badan, waxaa laga yaabaa inuu aad u kululaado. Weelka oo dhan ku rid qaboojiyaha muddo 20 daqiiqo ah ka dibna isku day mar kale karbaash.
Caanaha subagga ayaa dhadhamiya qadhaadh - Waxaa laga yaabaa inaadan kala dillaacin sonkortaada oo dhan taasoo sababi karta in meerisku uu iska dhigo. Ma jiraan wax aad sameyn kartid si aad u hagaajisid hadhuudhka oo aan ka ahayn inaad bilowdo.
meesha laga iibsado muraayadda muraayadda ee keega
My buttercream dhadhamiyaa sida subagga saafi ah - Aad ayey caadi u tahay dadka inay karbaashaan subagga caanaha. Haddii aad dhadhamiso subagga, sii wad karbaashka. Ku darista hawada waa waxa ka dhigaya dhadhanka buttercream mid la yaab leh.
Sidee u keydisaa shukulaatada swiss meringue buttercream?
Shukulaatada swiss meringue buttercream waxaa lagu hayn karaa heerkulka qolka 48 saacadood in kasta oo aan shaqsiyan qaboojiyaha ka dib 24 saacadood haddii aanan u baahnayn. Waxaa lagu hayn karaa qaboojiyaha muddo 2 toddobaad ah ama waad barafoobi kartaa 2 bilood ama ka badan.
Had iyo jeer dib-ugu-walaaq subaggaaga intaadan isticmaalin si aad mar kale kareem uga dhigto. Haddii ay qabow tahay, marka hore u soo qaad heerkulka qolka, ka dibna karbaash ilaa uu kareem iyo jilicsanaan noqdo.
Cunnooyinka kale ee qabow ee aad jeclaan karto
Silky siman, shukulaatada swiss meringue buttercream waa mid fudud, kareem leh oo ku dhalaalaya afkaaga. Waqtiga Diyaarinta:labaatan daqiiqado Waqtiga karinta:5 daqiiqado qaboojinta:10 daqiiqado Kalori:118kcal
▢8 ounces (227 g) ukunta cusub
▢16 ounces (454 g) sonkorta granulated
▢24 ounces (680 g) subag aan cusbo lahayn jilcisay
▢4 ounces (113 g) Shukulaatada (ama budada kookaha) dhalaalay oo qaboojiyey 90 to
Ku dhalaali shukulaatadaada baaquli aan kululayn karin 15 ilbidhiqsi illaa uu dhalaalayo. Ha kululayn. Qabow ilaa 90ºF
Soo qaado 2 'oo biyo ah digsi dhexdhexaad ah ka dibna yaree kuleylka illaa ay ka daadaneyso. Birtaada ama dhalada isku qasan dhalada dusha ka saar. Baaquli waa inaysan taabanayn biyaha.
Ku rid ukunta cad iyo sonkorta baaquli oo sifeeq ah marmar si aad u milisid sonkorta ugana ilaaliso ukunta cad inay wax karsato. Marka isku darku gaaro 110ºF ama aadan mar dambe dareemi karin wax gunta sonkor ah oo u dhexeysa farahaaga, waa diyaar
Dul dhig weelkaaga miisaankaaga ku karbaash korna karbaash ilaa aad ka gaarto meelaha dhaadheer ee aadka u adag. Tilmaamuhu waa inay toos u istaagaan markaad taabatid meeriska waa inuu dareemaa culeys iyo cufnaan badan.
Dhig bac weyn oo baraf ah weelka hoostiisa maadaama aad isku dareyso si aad u qaboojiso meeriska.
Yaree xawaaraha hoose. Si tartiib ah ugu dar subaggaaga qaybo yaryar, ka dib cusbadaada, dhalaalay oo la qaboojiyey shukulaatada iyo soosaarida vaniljiga.
Xawaaraha ku celi sare kuna karbaasho ilaa midabku khafiif yahay oo qalafsan yahay. Sii dhadhan, haddii ay weli dhadhamayso subag, sii soco.
Hoos u dhig xawaaraha si aad u hooseyso ka dibna ku daadi shukulaatada aad qaboojisay iyo vaniljiga iskuna qas illaa inta ay ka hagaagayso.
U adeegida:labaounces|Kalori:118kcal(6%)|Kaarboohaydraytyada:kow iyo tobang(4%)|Protein:1g(laba%)|Dufan:8g(12%)|Dufan Dufan:5g(25%)|Kalastarol:labaatanmg(7%)|Sodium:30mg(1%)|Kalibaalium:9mg|Fiber:1g(4%)|Sonkor:10g(kow iyo toban%)|Vitamin A:257IU(5%)|Kaalshiyamka:3mg|Bir:1mg(6%)
sida loo qurxiyo keegga unicorn
waxa ka mid ah keega ka dhiga mid qoyan
miro ku darista isku darka keega
sida loogu beddelo kookaha geedi socodka 'Dutch' kookaha caadiga ah